Titus3Myanmar Audio Bible Myanmar Bible .Net
Show consideration to all. We were once slaves but God saved us. Believers should maintain good works. Everyone here sends greetings. #BibleSummary
1 လူတို့သည် အထွဋ်အမြတ်အာဏာစက်၏ အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန်ခံစေခြင်းငှါ၎င်း၊ မင်း၏စကားကို နား ထောင်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ကောင်းသောအမှုအမျိုးတို့ကို ပြု၍ အသင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊
Titus2»